အမေရိကန်နိုင်ငံက ကျင်းပသည့် “ဒီမိုကရေစီ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ”သည် စစ်အေးတိုက်ပွဲအတွေးအခေါ်ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းသော အန္တရာယ်များသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝေဖန် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဝမ်ဝန်ပင်းအား နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက် ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် တွေ့ရစဉ် (ဓါတ်ပုံ - တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန)
အမေရိကန်နိုင်ငံက ကျင်းပသည့်”ဒီမိုကရေစီ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ”သည် စစ်အေးတိုက်ပွဲအတွေးအခေါ်ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းသည့် လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်ရာ နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်း၏ အထူးဂရုပြုမှုဖြစ်စေကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဝမ်ဝန်ပင်းက နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ လူပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီကို ဆန့်ကျင်သည့် ဒီမိုကရေစီ အတုအယောင် လမ်းစဉ်ကို အတူ ဆန့်ကျင်ရန်၊ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အတူကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်၊ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အတူ တွန်းအားပေးကြရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းနေ့တွင် ကျင်းပသည့် ပုံမှန်သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် သတင်းထောက်တစ်ဦးက “အမေရိကန်နိုင်ငံမှကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ ဒီမိုကရေစီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာ အမေရိကန်ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး ဝိသေသလက္ခဏာရှိတယ်ဟု ဟန်ဂေရီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးSijaldoက နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး ချင်ကောင်းနှင့် ရုရှားသံအမတ်ကြီး Anatoly Antonovတို့ကလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့ မည်သူက ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြီး မည်သူက မဟုတ်ဘူးဆိုသည်ကို မိမိသဘောဖြင့်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် စံပြုလောက်သည့် စစ်အေးတိုက်ပွဲအတွေးအခေါ်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ၎င်းမှာ ကမ္ဘာ့အတွေးအမြင်ပုံစံများကို ဆန့်ကျင်ဘက်ထား ပဋိပက္ခဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ကွဲလွဲမှုအသစ်များ ဖန်တီးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပူးတွဲရေးသား ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ထို့အပေါ် မည်သို့ သုံးသပ်ပြောကြားလိုပါသလဲ ”ဟူသော မေးမြန်းချက်အား အထက်ပါအတိုင်း တုန့်ပြန်ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုကာလများတွင် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းက အမေရိကန်ကြီးမှူးကျင်းပသည့် “ဒီမိုကရေစီ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ”အပေါ် ဝေဖန်မှုလှိုင်းလုံးများ ရိုက်ခတ်ခဲ့ရာ ၎င်းမှာ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းက ဤလုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် သံသယနှင့်ဆန့်ကျင်မှုကို ဖော်ပြကြောင်း ဝမ်ဝန်ပင်းက ဆိုသည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲသည် ကျင့်ဝတ်နှင့်တရားဝင်မှု ရှိမရှိအပေါ် ၎င်းက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် မိမိကိုယ်၌က ဒီမိုကရေစီအခြေအနေ ယိုယွင်းပျက်စီးမှုများ ရှိနေကြောင်း ၊ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့ဆန္ဒစစ်တမ်းကောက်ယူမှုများတွင် အမေရိကန်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေ၏ အကြီးမားဆုံး ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်သည်ဟု ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းက ယူဆကြပြီး အမေရိကန် လူထု ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အနေဖြင့် အဓိကရင်ဆိုင်နေရသည်မှာ ပြည်တွင်း ဆိုးဝါးသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများ ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြကြောင်း ဆိုသည်။
အမေရိကန်သည် ဒီမိုကရေစီ ယုံကြည်မှုကို အလွန်အကျွံ သုံးစွဲသူဖြစ်ပြီး အမေရိကန်အသွင် ဒီမိုကရေစီသည် ဒေဝါလီခံနေပြီဖြစ်သော်လည်း ဒီမိုကရေစီအလံကိုင်ဆောင်၍ အခြားနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးအားစွက်ဖက်ခြင်း၊ အခြားနိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာအာဏာအား ထိပါးခြင်းများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာ နိုင်ငံတကာဥပဒေအခြေခံစည်းမျဉ်းနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအခြေခံမူကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ကြောင်း ၊ ၎င်းကျင်းပသည့် “ဒီမိုကရေစီ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ”သည် လျော်ညီမှုမရှိသလို တရားဝင်မှုလည်း မရှိကြောင်း၊ “မိမိနိုင်ငံပြည်တွင်းရေး ပြဿနာကို ပြင်ပနည်းဖြင့် ကုစားခြင်း”သာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံပြည်တွင်းပြဿနာနှင့်ပဋိပက္ခများကို ဦးတည်ချက်ပြောင်းအောင် လုပ်ဆောင်နေကျ နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း ဝမ်ဝန်ပင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံက ကျင်းပသည့် “ဒီမိုကရေစီ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ”သည် ဒီမိုကရေစီလား ? ဒီမိုကရေစီကိုဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်လား? ဟု ၎င်းက မေးခွန်းထုတ်ပြောကြားခဲ့သည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရှိမရှိဆိုသည်မှာ ယင်းနိုင်ငံက ပြည်သူများက အရင်းခံဆုံးဖြတ်ပေးသင့်ပြီး ပြည်ပက လက်ညိုးညွှန်၊ ဆင်ခြင်တုံမဲ့မှတ်ချက်ပြုရမည်မဟုတ်ကြောင်း ၊ ဒီမိုကရေစီ၏စံချိန်ကို တိုင်းတာရာတွင် ယင်းနိုင်ငံပြည်သူများ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊ ယင်းနိုင်ငံရှိပြည်သူများတွင် ပါဝင်မှု၊ ကျေနပ်မှု၊ ရရှိမှု လုံလောက်စွာ ရှိမရှိဖြင့် တိုင်းတာသင့်ကြောင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် မိမိ၏နှစ်ခြိုက်မှုအရ မည်သည့်နိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီ၊ မည်သူည့်နိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်ကြောင်း ပိုင်းဖြတ်ခြင်းသည် အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံတည်း၏ပေတံဖြင့် နိုင်ငံအသီးသီး၏ ဒီမိုကရေစီအဆိုးအကောင်းကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ရာ ဒီမိုကရေစီ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ် သွပ်သွင်းခြင်းဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓါတ်ကို သစ္စာဖောက်ခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကို စင်စစ်ဆန့်ကျင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံက ကျင်းပသည့် “ဒီမိုကရေစီ ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ”သည် စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီလား အတုအယောင် ဒီမိုကရေစီလားဆိုသည်မှာ မေးခွန်းထုတ်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်ဝန်ပင်းက ဆိုသည်။ ဒီမိုကရေစီသည် လူသားအားလုံ၏ဘုံစံတန်ဖိုးဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံအသီးသီးအနေဖြင့် ပြည်တွင်းတွင် အဆိုပြုသင့်သလို နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေ ဒီမိုကရေစီအသွင်နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအသွင်ရှိရန် ထောက်ခံအားပေးသင့်ပါကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂကို ဗဟိုပြုသည် နိုင်ငံတကာစနစ်၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေကို အခြေခံသည် နိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်းကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီအလံထောင်၍ ကမ္ဘာတွင် တပ်ဖွဲ့ခွဲ၊ ကွဲလွဲမှုများ ဖန်တီးနေခြင်းသည် အခြားရည်ရွယ်ချက်ရှိ၍ဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီကို အသုံးချကိရိယာအသွင်၊ လက်နက်အသွင်ပြောင်း၍ ထိုမှတစ်ဆင့် မိမိ၏ပထဝီမဟာဗျူဟာကို တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ရာ ဒီမိုကရေစီ အရေခြုံ၍ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးမှုကို ရှေ့ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုနှစ်က စစ်အေးတိုက်ပွဲ အဆုံးသတ်သည့် နှစ် ၃၀ ပြည့်အချိန်အခါဖြစ်ကြောင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ‘ဒီမိုကရေစီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ’ကျင်းပခြင်းက စစ်အေးတိုက်ပွဲအတွေးအခေါ်ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းတဲ့ အန္တရာယ်များ လုပ်ရပ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းက အထူးဂရုပြုသတိထားနေကြကြောင်း၊ မိမိတို့အနေဖြင့် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ လူပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီကို ဆန့်ကျင်သည့် ဒီမိုကရေစီ အတုအယောင် လမ်းစဉ်ကို အတူဆန့်ကျင်ရန်၊ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အတူကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်၊ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အတူ တွန်းအားပေးကြရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)